Haweeney saaxiib la ah madaxweynaha South Korea oo la xiray – The Voice of Northeastern Kenya
Haweeney saaxiib la ah madaxweynaha South Korea oo la xiray
Star FM November 1, 2016
Laamaha amaanka ee waddanka Kuuriyada Koonfureed ayaa gacanta ku dhigay haweeney saaxiib dhow la ah madaxweynaha dalkaasi Park Geun-hye.
Haweeneydaasi oo lagu magacaabo Choi Soon-sil ayaa loo xiray si deg deg ah, iyadoo waaxda dacwad oogista ee dalka South Korea ay sheegtay in aysan maskaxdeeda daganmeyn ayna khatar keeni karto hadii ay dibadda u duusho.
Mrs Soon-sil oo muddo ka badan 10 sano saaxiib lahayd haweeneyda hogaamisa dalkaasi ayaa in badan faraha kula jirtay maamulka dowladda, waxaana lagu eedeeyay in ay saldhig u tahay fadeexad Musuqmaasuq ah oo ka dhex jirta xukuumadda Kuuriyada Koonfureed.
Choi oo dhawaan dib ugu laabatay dalkaasi oo ay dibadda uga maqneyd ayaa si iskeed ah isugu dhiibtay booliska, kadib markii ay dibad baxyo waaweyn oo iyada looga soo horjeedo ka dheceen waddooyinka waaweyn ee waddanka Koonfur Kuuriya.
← Britain oo baareysa xaaladda bani’aadannimo ee dalalka Carabta
Khilaaf siyaasadeed oo ka taagan musharaxa kursiga baarlamaanka ee Waqooyiga Mandera →